Rinjiga Calaamaynta Jidka Thermoplastic
Qaaciddo gaar ah, oo wadashaqayn wanaagsan leh waddo, horay ugu calaamadee shirkaddayaga shirkadeena gaarka ah (gaar ahaan saldhig la taaban karo) ayaa xoojin doonta isku-duubnida.
2. Liibaanka lidka ku ah
Rinjigayagu wuxuu leeyahay wax ka-siibid. Xaaladda qulqulka wanaagsan, walxaha ka-siibashadu waxay xaqiijin kartaa ka-siibid-ka-hortagga wanaagsan waxayna sare u qaadeysaa amniga taraafikada.
3. Saamaynta milicsiga
Marka loo eego heerka dejinta ee kuullada dhalada, si habboon u dooro xasilooni deggan oo tayo sare leh oo kuul galaas ah oo leh saamiga walxaha kala duwan. Si siman ugu dhex dar gudaha rinjiga oo sii daa kuul galaas nooca isku qasan marka la fulinayo waxay xaqiijin doontaa calaamadaynta cusub iyo duugga mar walba inay ka muuqato feker sare.
4. Si dhakhso ah u qalaji
Isticmaal qaaciddo kala duwan si aad u soo saarto rinjiga sida waafaqsan heerkulka, huurka iyo xaaladda waddada marka aad fulinaysid, hubso xawaaraha qallajinta degdegga ah iyo hantida ka hortagga sumaynta.
Dooro iftiin aad u fiican iyo xasiloonida kuleylka ee alaabta ceyriinka ah, ku dar waxyaallaha ka ilaaliya shucaaca ultraviolet waqti isku mid ah, si aad u hubiso midabka muddada dheer shaqeynaya iyo dhaldhalaalka qorraxda hoosteeda.
6. Anti-dildilaaca timaha
Timo-dillaacinta calaamadaynta waa dhibaato farsamo oo ku timaadda calaamadeynta wershadaha alaabta guriga iyo dibaddaba. Ka dib cilmi-baaris muddo-dheer ah iyo iyada oo lagu darayo alaab lipid iska caabin heer-sare ah iyo buuxiye shaqeynaya, shirkadeena ayaa si buuxda u xallisay dhibaatada timaha dillaacda inta lagu guda jiro fulinta.